Duulimaadkii Morale ee Covid-19 ee Kanada ayaa isu beddelay Musiibo! | RayHaber | raillynews
HomeDUNIDAAmerica1 CanadaDuulimaadkii Morale ee Covid-19 ee Kanada ayaa isu beddelay Musiibo!
19 / 05 / 2020 1 Canada, America, DUNIDA, GUUD, cimilada, Headline, ISDIFAACA
boodhka 'acrobatic jet' kaasoo ka dhigaya caarada niyadda ka soo horjeedka 'canada in canada'
Diyaarad cirka ka duushay oo laga leeyahay Royal Canadian Air Force ayaa burburtay iyadoo qabaneysay duullimaad mudaaharaad ah oo lagu taageerayo dagaalka ka dhanka ah coronavirus. Pilot Jennifer Casey ayaa shilka ku dhintay, halka duuliyihii kale Richard MacDougall uu si xun u dhaawacmay. Aagga ay ku dagaan diyaaradaha dagaalka hawada, oo loo yaqaan Snowbirds, ayaa ku dhacay magaalada Kamloops, guri ayaa sidoo kale lagu gubay waxyeelada shilka.
Raiisel wasaaraha Kanada Justin Trudeau ayaa ku dhawaaqay in duuliyaha Casey uu "aad uga xumaaday" shilkii uu ku dhintay. Trudeau wuxuu cadeeyay in Carcasses ay sameynayeen duulimaadyo mudaharaad ah labadii usbuuc ee lasoo dhaafay si ay kor ugu qaadaan niyadda dadka Kanada. Casey, oo naftiisa waayay, wuxuu sidoo kale ahaa afayeenka loo yaqaan 'Carps'.
Bayaanka ay soo saareen ciidamada cirka ee Royal Canadian, murugada ka dhalisay shil kale ayaa la xoojiyay.
Pilot Jennifer Casey oo ku dhintay shilka
Ciidamada Kanada waxay u baroorteen diyaaradda helikobtarka Sikorsky CH-148 ee dhacday
CH wadata dhiig
Diyaarad nooca dagaalka ah oo nooca Helikobtarka ah oo nooca Helikobtarka ah oo nooceedu yahay Badda Ionian ee u dhaxaysa Griiga iyo Talyaaniga ayaa la waayey fiidnimadii Abril 148. War qoraal ah oo ka soo baxay NATO, waxaa lagu xaqiijiyay in diyaarad helikobtar ah ay dhacday intii lagu gudajiray howshiisa. Wasaaradda Difaaca Kanada ayaa ku dhawaaqday Jimcihii, 29-dii May 1 in lix ka mid ah shaqaalaha diyaaradda ay ku dhinteen shilka diyaaradda. Waxaa la sheegay in howlihii goobidda iyo samatabbixinta ee shaqaalihii markabka ay sii wadeen howlo goobid kadib waqti dheer.
Hawlihii sahaminta awgeed, shaqaalihii markabka Sikorsky CH-148 ee helikabtarka Cyclone ayaa gaadhay 1 maydad ah, halka shan ka mid ah shaqaalihii markabkaas aan weli la soo gaadhin. "Shanta xubnood ee ka hartay helikobtarka ayaa hada si rasmi ah loogu arkaa inay lunteen oo loo tixgaliyay inay dhinteen," Wasaaradda Gaashaandhigga Canada ayaa lagu yiri bayaan. Inta uu hogaamiyaha NATO Fredericton uu kusii jeedo dekada ku taal wadanka talyaaniga, xulafada NATO ayaa sii wadi doonta dadaaladooda badbaadinta. (Isha: DefenceTurk)
Duulimaadka Owl iyo Tareenka Sare
Airsea wuxuu diyaar u yahay duulimaadka ugu horeeya ee Bodrum
Shaqada tareenka xawaaraha sare waxay keentay musiibo
Dareenka injineerka ayaa ka hortagay musiibada
35 jadwalka ladilay
12 dhaawac ba'an oo laga badbadiyay mareenka oo keeni kara musiibo
Ku guuldareysiga in la raadiyo musiibada wadada Metrobus
Heerka Hoos-u-Celinta ee la sii mariyey Baaskiilka
Daahfaahin la'aanta shaqaale ku takhasusay Tuniisiya ayaa horseedaysa musiibo
Edmonton City ee Canada si ay u sameeyaan khadadka Valley Line Line TransEd Partners
Soo dhaweynta Masiibooyinka Marmaray! "Dhibaatada Tareenka ee Screen"